Umbuzo ukuthi ukuhlela soxhaso ukukhokhela izinsiza Umbuso indawo kakhulu ethintekayo iningi labantu waseRussia. Njengoba Bathi, onesifo Imininingwane - ungumnikazi emhlabeni futhi owazi lutho, uhlale ukhishwa inyumbazane. Ngempela, kuyindida ukuthi abacebile uthola okuningi kusuka isimo kuka abampofu. Ngakho-ke, sithola ukwaziswa kanjani ukukhipha imali yesibonelelo sikahulumeni yerenti, hhayi lazy kakhulu ukundlula inkantolo, ukuthola ukwesekwa uhulumeni.
Izizathu imixhaso isimo
A ukwanda okukhulu kwezincwadi labantu kwamangqamuzana emva kokuwa kweSoviet Union walahla iningi lezakhamuzi, ikakhulukazi labo abavela emphakathini kwabahluphekayo, ekubeni khona esidabukisayo. yokululama izitayela Umbuso amanani, ngokuhambisana namazinga European, ngeshwa, kungukuthi ephelezelwa umgwaqo ofanayo engenayo kanye izimpesheni. Ngenxa yalokho, izindleko wokugcinwa yokuhlala siqu noma yaqashiswa babe umthwalo unsupportable ngoba izigaba eziningi izakhamuzi. State kusukela ngo-1995, lucwaningo Inqubomgomo umxhaso womphakathi yokukhalaza ngokugcwele izindleko amasevisi yokukhokha abalwe ngenhla. Kodwa akuyona yonke into ngempela abadinga usizo, sathatha ngokunenzuzo. Isidingo ukuthuthukisa lolu hlobo yesibonelelo sikahulumeni kanye nokubika komhlaba olunembile umbuzo kanjani ukukhipha isibonelelo amasevisi ishayise emzini.
Uxhaso njengoba oluthile wombuso aid
Uxhaso kukhona umnikelo izimali abathengi umphelelisi ingxenye alukho inkokhelo izimpahla ecacisiwe ngokucacile. Uma umzuzi izimali ukuze sizisebenzise ngendlela ehlukileko, isimo unelungelo befuna kubuye tibalo esabiwe. State ukwesekwa malini izakhamuzi ezindabeni ezibalulekile emphakathini yokukhokha ibalwa hhayi kuso sonke isibalo sabantu, labaswelayo ngempela. Ngokwezindinganiso zesifunda, umnikazi impahla unelungelo ukukhipha isibonelelo indlu uma kwenzeka ukuthi okuqukethwe yayo imali engaphezu kuka-22% emindenini Imininingwane, njengoba siphila kuleli izindlu. Usayizi uxhaso is hhayi kusungulwa ngokucacile futhi incike inani lamalungu omndeni kanye kungakhathaliseki ukuthi banesifo amalungelo.
Uxhaso ungathola njengoba abasebenzisi izindlu zikahulumeni noma kamasipala impahla, amalungu izindlu ama cooperatives ukuthi ukususa ezezindlu kanye ukubhaliswa esiyisibopho inkontileka, kanye abanikazi amafulethi. Umthetho ubeka ukuthi abafundela uxhaso nesimo kumele abe yisakhamuzi yeRussia noma kwamanye amazwe enobungane, okuyinto baye basayina isivumelwano okuhambisanayo. Namuhla izakhamuzi Belarus naseKazakhstan. Njengoba kushiwo ngenhla, umfakisicelo kumele ahlinzeke ubufakazi obubhalwe ukuthi ukugcinwa efulethini wachitha amaphesenti angaphezu kuka amabili amabili ibhajethi umndeni Imininingwane. Esikhathini esidlule, izibonelelo angase akwazi ukwamukela izakhamuzi ekukhokheni endabeni yokukhokha intela imba. Kuleli qophelo, uma kungase kutholakale ngenhloso yokukhokhela izikweletu zakho, yahlelwa inkontileka ku ukuvuthwa kwabo futhi Inkokhelo eqalwe, ofake isicelo unelungelo soxhaso wombuso amasevisi LCD. Uxhaso enikiwe isikhathi esingaphezu kwezinyanga eziyisithupha.
Isitatimende bese usetha kwemibhalo sokubhalisa lukahulume- ku Izinsiza kumelwe kufayela umnikazi noma abaqashi. Emacaleni angakajayeleki kwakungenzeka lokhu kukhona nabameleli bayo. Kulezo ngokomthetho kubhekwe njengento abazali, ababheki, abazali abakuthola noma ababheki izingane noma izakhamuzi abagula. Kwezinye izimo, kumelwe ozibhalayo ummeli olungisa izivumelwano ukukhipha amandla ommeli egunyaza ukuba bamele izimfuno esisemthethweni umnikazi noma eyisakhamuzi izindlu. Ifomu ekhethekile isicelo itholakala kusukela ejensi ukuphepha komphakathi namkha esinge elektroniki ukulanda kumawebhusayithi abafanele. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukukhipha imali yesibonelelo sikahulumeni amasevisi ishayise kuya ku-intanethi noma ngeposi. Lokhu kusindisa ekuhambeni uchungechunge umyalo. Ukuthumela imibhalo phezu Internet kudinga ukusetshenziswa ukuphrinta electronic.
Abantu abaningi abathanda indlela ukukhipha isibonelelo amasevisi Umbuso indawo, bakhathazekile isidingo ukuqoqa inqwaba imibhalo. Kwathi gidi lapho wonke umuntu, awayona kangaka:
Ulwazi inani amalungu omndeni abaphila ne umfakisicelo (isitifiketi Ukwakheka umndeni).
Ulwazi imali yamalungu omkhaya ngoba ezinyangeni eziyisithupha ezedlule.
Ulwazi mayelana Umbuso izikweletu (irisidi ikhokhwe). Uma it has a izikweletu, kubalulekile ukuhambisa inkontileka ne Tinsita kamasipala sokukhokhwa kwesikweletu, ne namarisidi zokukhokha kuqala.
Amakhophi ezincwadi eqinisekisa:
abantu ilungelo lokuthola izindlu noma ukusetshenziswa (nesenzo azimele, noma inkontileka yakhe);
ubuhlobo namalungu omndeni komfakisicelo ebekiwe izindlu, okuqukethwe esimelela akhiphe isibonelelo sabangasebenzi;
ilungelo umfakisicelo noma namalungu omndeni wakhe izinzuzo kanye nezinye isinxephezelo.
An kwalokho ebalulekile: ungakwazi Qinisekisani zonke lezo amakhophi, futhi kungaba ukubahlanganisa original futhi ubonise isikhulu. Lokhu kuzokwenza ukuthi asikho isidingo ukwenza izinyathelo ezengeziwe ukubhalisa imixhaso.
Iziphathimandla obhekene elikhiphe izibonelelo
Enye impikiswano ebalulekile yilapho ukukhipha imali yesibonelelo sikahulumeni iqashwe futhi lapho iziphathimandla banesibopho ke. Ngeshwa, akukho emzimbeni owodwa ukuthi ukuzixazulula izinkinga ngenhla endaweni zonke izikhonzi Federation. Enhloko-dolobha kanye nakwamanye amadolobha amakhulu kungaba maphakathi nesabelo izindlu, okuyinto evame kakhulu okubizwa ngokuthi izikhungo Amatebhe nokunikeza izinsizakalo zomphakathi. Kodwa kweminye imizi kanye izifunda inqubo yemizimba zikamazisi. Kunoma ikuphi, ukuba nibuze ngakho endaweni yokuhlala, ngeke kube nzima. I emisha yakamuva kungenzeka eMoscow nakwamanye amadolobha ukukhipha imali yesibonelelo sikahulumeni Umbuso amasevisi ngokusebenzisa izinkonzo zomphakathi nge e-mail. Kulokhu, uma izikhulu umugqa zabo zithola ulwazi oludingekayo ukuze bayifeze inqubo, ukuhlinzekwa langempela kwemibhalo ayidingekile.
Umthetho usungula inkathi kokucubungula isicelo somxhaso yokukhokha izindlu. Usuku kulethwa wonke amadokhumenti ngalesi sikhathi ngeke sidlule izinsuku eziyishumi, inani engafaki ngezimpelasonto namaholidi. Uma Nokho, wathola ukuntula iyiphi izibambiso, iziphathimandla zomphakathi Unelungelo sokumisa kokucubungula isicelo. Isicelo zingakapheli izinsuku ezintathu kumele azise. Zeqhwa we kokucubungula isicelo ongeke uhlale isikhathi eside esingaphezu kwenyanga. Uma imibhalo zezibonelelo athunyelwa engxenyeni lokuqala lwenyanga, ukuthi kuye umfakisicelo uzothola imali usizo. Endabeni yokubhaliswa ngoxhaso engxenyeni accrual yesibili zizoqala ukusebenza kusukela ngenyanga ezayo.
Ukusebenza nokusebenzisa uxhaso
Ngakho, it is ngokuvamile aqondwe njengokufaka nenkinga selekelelo ngoba Tinsita. It uhlala ukucacisa lokho kubonakala ngempela wombuso aid. Ezinye balinde ukunciphisa imali yokukhokha namarisidi zhekovskih. Kodwa uxhaso - lokhu akulona izinzuzo. Izakhamizi uzokhokha ngokugcwele nyangazonke Umbuso izikweletu, ne umehluko kuphela ukuthi isimo zonke izinsuku ezingamashumi amathathu, isuke ku-akhawunti yakho yasebhange a inani elimisiwe imali izibonelelo ukusiza ukukhokhela lokhu. Ngakho, kumelwe futhi ungakhohlwa uthole i-akhawunti yakho siqu. Uma leli thuba elihle kangaka - ngenxa yezizathu inhloso - hhayi, izimoto ukulethwa kungenzeka kwenziwe ngeposi noma amasevisi imali igunya.